Wasiirka Amniga oo ballanqaad u sameeyay hooyada Ikraan | KEYDMEDIA ONLINE
Wasiirka Amniga oo ballanqaad u sameeyay hooyada Ikraan
Wasiirka ayaa sheegay in uu murugada la qeyb sanaayo qoyska Ikraan Tahliil, islamarkaana ka cudur daaranaayo caqabadaha hortaagan caddaalad u helideeda iyo sida shaqsiyaad kamid ah madaxtooyada Soomaaliya u doonayaan inay duudsiiyaan xuquuqdeeda ka muwaadin ahaan.
MUQDISHO, Soomaaliya- Wasiirka cusub ee wasaaradda Amniga Cabdullaahi Maxamed Nuur ayaa xafiiskiisa ku qaabilay Qaali Maxamed Guhaad oo ah hooyada Ikraan Tahliil.
Waxaa ay ka wada hadleen sidii ay caddaalad ugu heli laheyd gabadheeda, iyadoo xustay inay ku tabeeyso Taliyihii hore ee NISA Fahad Yaasiin.
Wasiirka ayaa sheegay in uu murugada la qeyb sanaayo qoyska Ikraan Tahliil, islamarkaana ka cudur daaranaayo caqabadaha hortaagan caddaalad u helideeda iyo sida shaqsiyaad kamid ah madaxtooyada Soomaaliya u doonayaan inay duudsiiyaan xuquuqdeeda.
Wasiir Cabdullaahi Maxamed Nuur ayaa ku booriyay inay dhigan karaan, dibadbax nabadeed oo ay ku codsanayaan sharciga in la hor keenno dambiilayaashii ku lugta lahaa kiiska Ikraan Tahliil.
Dhawaan ayay aheyd, markii ciidamo taabacsan Fahad iyo Farmaajo ay kala eryeen dad si nabad ah ugu mudaaharaadayay isgoyska KM4 ee magaalada Muqdisho, taasi oo ka marag kacday sida ay uga soo horjeedaan caddaalad u raadinta Ikraan oo aheyd gabar da’ yar ah oo qarankeeda u shaqeyneysay.
Farmaajo oo aan rabin inay caddaalad hesho Ikraan, welina aan la kulmin qoyskeeda, ayaa la rumeysan yahay in uu sabab u yahay khilaafka kala dhaxeeya Ra’iisul Wasaare Rooble.
Fahad Yaasiin oo lagu tuhunsan yahay ku lug lahaanshaha Kiiskan ayaa maanta soo gaaray Muqdisho, kaddib maalmo uu ku marmarsiyoonayay in loo diiday uu Muqdisho ku laabto, taas oo ah marin habaabin cad.
Lama oga waxa ka dhalan kara dibad baxa loo fasaxay qoyska Ikraan Tahliil, balse waxay tani abuuri kartaa dagaal mar kale ka qarxa caasimadda, taasi oo soo afjari doonto nidaamka ku dhisan kali talisnimo.